Tomato "Dusya red": nkọwa nke dị iche iche, àgwà nke ndị a ụtọ tomato - Akwukwo nri - 2020
Ụdị tomato dị ụtọ ma dị uto, ya na aha ịhụnanya "Dusya red"
N'ihi njirimara ya, ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-amata ọtụtụ red tomato Dhia. Ndị na-azụlite Russia na-eri nri dị iche iche na narị afọ nke 21.
Ma na ịmatakwu banyere tomato ndị a dị ebube ị nwere ike ịmụta site na isiokwu anyị. Gụọ nkọwa zuru ezu banyere ụdị dịgasị iche iche na ya, mara nke ọma na ya, na-amụ banyere àgwà nke ịkọ ihe.
Atụmatụ nke na-eto eto
Tomato "Dusya red": nkọwa nke dịgasị iche iche
Ngwakọta dịgasị iche iche nke tomato Red uzo enweghị otu F1 adọ ụdị ụfọdụ. A na-echekarị na oge dị iche iche na-ekpebi oge. Ogologo osisi ya dị site na otu mita na ọkara. Stamb adịghị emepụta. Nke a dịgasị iche iche tomato na-egosi oke nguzogide ọrịa dị iche iche. Ọ dị mma maka ịkụ ihe n'ubi, n'ala greenhouses na ebe obibi oge.
Akpọrọ ihe ndị mbụ dị na tomato tomato bụ Dusya Krasnaya ka e guzobere n'elu akwukwo nke asaa na nke itoolu, na nke ọzọ - site na atọ epupụta. Otu ahịhịa nwere mkpụrụ isii. Mkpụrụ mbụ bụ ibu karịa ndị ọzọ.
Uru nke tomato iche Dusya uhie nwere ike ịkpọ:
Ezigbo mkpụrụ osisi.
Uzo ojiji nke tomato.
Enweghị uru dị iche iche nke tomato dị iche iche enweghi.
N'ihi na nke a dịgasị iche iche tomato e ji ezigbo oke mkpụrụ.
Tomato "Dusya red" nwere ọdịdị nke oval dị ka ihe atụ.
Nnukwu anụ na-anọgidesi ike.
Mgbe ha tozuru okè, ha acha uhie uhie.
Ọnụ ọgụgụ osisi dị obere.
Na mbụ na-amịpụta ibu ha bụ gram 350, na ụdi - site na 150 ruo 200 grams.
Mkpụrụ ahụ nwere obi uto na uto uto, n'ihi nchikota nke shuga na acids. A na-ama ha site na obere ọdịnaya nke nests na ihe akọrọ. Ọhụrụ, a na-echekwa tomato ndị a ogologo oge. A pụrụ iji tomato "Dusya red" mee ihe ọhụrụ, nakwa dị ka eji ejikere pickles.
Tomato Dusya-acha uhie uhie dị mma maka ịkụ ihe na mpaghara dị iche iche nke Russia Federation. Akuku osisi kwesiri ime nke 50-60 tupu o kpoo n'ala. Maka ịgha mkpụrụ nke osisi, ọ dị mkpa na ha nọ n'ime ụlọ ebe ikuku ikuku dị n'etiti 23 na 25 degrees Celsius.
Mgbe ịkụ mkpụrụ dị n'ala na mita mita anọ ekwesịghị ịbụ ihe karịrị 3 bushes. Tomato "Dusya Krasnaya" chọrọ mgbe niile na-atọ na fertilizing na ịnweta nri. Mkpụrụ akwụkwọ ndị a chọrọ ijiri nkwado ahụ. A na-akpụ ha site na otu ma ọ bụ abụọ ị ga.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbatị germination nke osisi, melite osisi ma melite mkpụrụ osisi set, ị nwere ike iji na-akpali stimulants nke mmepe na ibu.
Ụdị tomato a adịghị enwe ike ịrịa ọrịa, ị nwere ike ichebe ya site na pests na enyemaka nke ọgwụ ụmụ ahụhụ pụrụ iche. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgha mkpụrụ ọka na-atọ ụtọ mgbe niile, kụọ osisi tomato na-acha uhie uhie n'ubi gị.